Ezigbo Mmekọahụ Mmekọahụ Buyzụta ọnụ ala maka ire ere xymụaka xylọ Egwu
Ree ọnụ ahịa dị ọnụ ala
00 ụbọchị 00 : 00 : 00
158cm Belloc + Sexy Lingerie + Masturbator + Washer + Big Boosu Detachable Legs TPE Mmekọahụ Mmekọahụ dị ọnụ ala.
148cm Jingjing + Washer + Masturbator + Akwa Sexy + E-Cup Nnukwu ara Nwanyị nwanyị Japan dị ọnụ ala TPE ịhụnanya nwa bebi.
140cm Harlow + Akwa Sexy + Masturbator + Washer + D Cup Dolls Love
140cm Gracelyn + Masturbator + Sexy Underwear + Washer + D Cup Best Realistic Cheap Sex Dolls For Sale
140cm Gabriela + Masturbator + Washer + Sexy underwaist + D Cup Thin Waist Love WM Dolls.
157cm Simona + Washer + Masturbator + Sexy Lingerie + B-Cup Ara TPE dị ọnụ ala nwa bebi mmekọahụ.
Hot Sale Real Life Mmekọahụ Dolls
148CM Nnukwu nnụnnụ tit Brown Skin TPE Mmekọahụ Doll
Ewepụghị Igbe Gburugburu Japanese Girl TPE Mmekọahụ Doll
Imirikiti Zụtara 148CM Sexy Nnukwu Ndụ Nrụrụ Oke Mmekọahụ Mmekọahụ
Nnukwu Anya TPE Mmekọahụ Mmekọahụ 159CM
150CM B Cup Onye Nlekọta Mara Mma Mara Mma TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
155CM Obere achịcha mara mma onye nkuzi asụsụ mba ọzọ TPE mmekọahụ nwa bebi
Ezigbo Iche Ezigbo Mmekọahụ
Aaliyah-140cm D-Cup Thin Waist Curls TPE WM Dolls
Evelynn - 166cm C -Cup Sexy Tight Swimsuit Thin Waist
Emerson-157cm B-Cup Mini Boobs Tan Skin TPE WM Dolls
Millie - 156cm Nwa bebi mara mma TPE WM ụmụ bebi
Connie - 155CM B iko Ezi Aka Sexy Little Mma TPE Mmekọahụ Doll
Alana - 164cm D -Cup Tan Skin WM Cheap Tpe Sex Doll
Charlotte - 164CM J Cup Nnukwu ara TPE WM ụmụ bebi
Piper - 157cm B-iko Nnukwu Anya Na-susuo Gị Site na Mgbidi WM Dolls
$ 1,704.21$ 2,499.99
Amari - 172cm B -Cup Sexy Lingerie Thin Waist TPE Love WM Dolls
$ 1,824.89$ 2,367.99
Blair - 172cm D -Cup Nnukwu ara obere ụmụ bebi WM
Josephine - 172CM B -iko Tan Skin Wm Tpe nwa bebi
Alexandria - D Cup 140CM Thin Tan Skin dị ọnụ ala TPE Mmekọahụ
Janet - 157CM WM B Cup Skier TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
$ 1,451.00$ 1,662.76
Ava - 142cm Sexy Thin WM TPE Nwa bebi
$ 1,308.99$ 2,658.99
Ashley - 155CM B -Cup Ezigbo akpụkpọ anụ TPE WM Dolls
$ 1,590.26$ 1,945.99
Mariah - 172cm D -Cup Picnic Sun Bath Tan Skin WM Dolls
Aurora - 162CM F-Cup WM Tan Skin TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
$ 1,648.85$ 2,144.99
Sutton - 140cm D -Cup Thin Waist Love WM Dolls
Norah - 161cm Nnukwu ara ara nwa bebi TPE Mmekọahụ
$ 1,623.92$ 2,346.99
Kaia - Isi 173CM Nnukwu ntutu ntutu dị mkpụmkpụ
Mckenzie - 156cm B -Cup Big Ass okenye WM Dolls
Hilary - 156CM Little Ekwensu nwere ihu ọma WM Mmekọahụ Mmekọahụ
Malia - 173cm Nwa bebi mara mma nke nwere oke ara WM
Morton - 16cm Nnukwu ara ara nwa ara dị gịrịgịrị TPE mmekọahụ nwa bebi
Lena - 163cm H -Cup Nnukwu Anya
$ 1,812.13$ 2,499.99
Julianna - 163cm H -Cup Big Boobs Okenye Mmekọahụ Mmekọahụ Adult Dị ọnụ ala
Charlee - 161cm Nnukwu ara nwere obere nwa bebi TPE
$ 1,623.92$ 1,978.99
Amina - 172cm B -Cup Goddess Thin Waist WM Dolls
$ 1,846.85$ 2,458.99
JoJo - Onye ọrụ ịma mma nke oke ibu nwa bebi Irontech nwa bebi
Inepo - 150CM Rose Goddess Brown Skin TPE Mmekọahụ Doll
Rsohụnanya asthụnanya rsohụnanya nke Torso
Kedu ihe bụ ndụ nwa bebi kachasị mma?
You nwere nke gị ezigbo bebi na na na? Ugbu a, ha bụ usoro ọhụụ na North America. N'ikwu okwu banyere ụmụ bebi, ma eleghị anya, ị ga-ebu ụzọ chee echiche banyere bebi. Mana nke ahụ bụ oge gara aga. Ọ bụ ndị ọkwọ ụgbọ mmiri Dutch nke narị afọ nke iri na asaa mepụtara ụmụ bebi ndị kachasị ochie bụ ndị mmiri dịpụrụ adịpụ n'oge njem dị anya. Ha chọpụtara na ọ ga-egboro ha mkpa ha n’ụzọ ụfọdụ. Ejiri akwa akwa ma ọ bụ uwe ochie, ụmụ bebi a na-egbo onwe ha bụ ihe doro anya nke ụmụ bebi taa. N'ezie, ka oge na-aga, nkà na ụzụ na-eru ndị mmadụ nso. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, otu ndị na-emepụta ihe, nke ndị urdolls na-eduzi, emepụtala ụmụ bebi ndị ọhụrụ na-eme ihe dị ndụ. Ka ọ dị ugbu a, nwa bebi ahụ na-ewu ewu na North America na Europe.
Tupu ịzụrụ nwa bebi gị. I kwesiri ima ihe omuma banyere umuaka umuaka ohuru. Weebụsaịtị anyị nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụmụ bebi niile. Nwa bebi ndị Asia nwere ike ịbụ n'ihi obere obere ha ma ọ bụ ihu ọchị ha na-emeghị ihe ọjọọ na-eme ka ndị nwoke na-ekpo ọkụ nwee agụụ ịhụnanya. Ma obu ikekwe ichoro isoro onye obula mara mma Japanese nwa bebi. O nwedịrị ike ịbụ echiche efu gị nke anime n'afọ iri na ụma gị. N'ebe a, anyị ga-amụta banyere akụkọ ihe mere eme nke ụmụ bebi, nhọrọ ndị dị ugbu a n'ahịa na nhọrọ dị iche iche mgbe ị na-ahọrọ nwa bebi.
Kemgbe 2012, a na-eji nwa bebi TPE na nwa bebi silicone dochie anya ụmụ bebi mmekọahụ na-agba agba na ahịa. Thermoplastic elastomer nọchiri akpọ TPE na-ejikarị, karịsịa n'ihi na ezi uche nwoke na bebi nke ndi n’emeputa di nma karie elu. Ọ dị ọnụ ala karịa ịme ihe eji egwuri egwu nke silicone gwọrọ platinum dị oke ọnụ. Fọdụ ndị na-emepụta doll nke oge a agbakwunyela sistemụ sịlịkọn ha n'ime.
Dolmụ bebi TPE na ụmụ bebi silicone nwere nke ọ bụla. Ihe TPE dị ọnụ ala. Ọnụahịa nwa bebi na-enwe mmekọahụ nke ejiri ihe TPE mee dị ala karịa ọnụahịa nwa bebi silicone. Mgbanwe na ịdị nro dịkwa mma. Ihe ndị dị na silikoni dị oke ọnụ, mana ụmụ bebi silicone na-adịgide adịgide ma dị ezigbo nso. A na-eji dolị silicone gwọọ nwa bebi Silicone, ma teknụzụ platinum nwere ogologo ndụ, ọ naghị ewekarị iwe na iwe.
Humanmụ mmadụ na-enwe mmekọahụ na-enwe mmekọahụ nwere ike ịhọrọ 70 ụdị brothels ndị a na Japan wee họrọ nke mbụ brothel dị na Europe na Machị 2017. Site na njikwa njikwa, ụmụ bebi bụ ezigbo ndị ọrụ, ha nọ ebe a n'ihi na ha anaghị arịa ọrịa, ha na-adị mma mgbe niile, ha na-enye oghere atọ ahụ, enweghị mkpesa ma ọ bụ ụgwọ ọzọ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na-eji otu teknụzụ eme ihe dị ka obere ihe eji egwuri egwu iji mee ụmụ bebi. Site n'ọgbọ ọdịnala nke ndị ntorobịa ji ịntanetị eme ihe, enwere ọtụtụ nnọkọ maka ndị na-amu amu na-eji akwa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ iji mee nke ha ọnụ ala mmekọahụ bebi.
Site na mmepe nke ọha mmadụ, ụmụ mmadụ na-achọ ụzọ ka mma ịnụ ụtọ ndụ. Ofzọ ntụrụndụ sikwa na-abawanye ụba. Lsmụ bebi na-enwe mmekọahụ kacha mma bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mmadụ mkpa. Ihe zuru oke, ihe okike bara ọgaranya, onye ọrụ ya bụ imeju agụụ mmekọahụ nke ndị mmadụ. Zụta na iji ụmụ bebi taa na-aghọwanye ihe nkịtị, dịka ndị mmekọ nwoke na nwoke nwere ikike nke ha. Ndị ọzọ agaghị enwe enyi n'ebe ị nọ n'ihi na ị na-eji mgbaaka mmekọahụ. Ihe ị kwesịrị ịma bụ na nke a bụ ihe ùgwù gị.
Maka ọtụtụ mmadụ. Ha dị ka ezigbo ụmụ nwanyị. Nwere ike ibi ndụ nrọ gị kachasị mma - site na otu n'ime ụmụ bebi kachasị mma anyị nwere, ị nwere ike iwetara gị oge kacha nwee obi ụtọ. Ha dị ka ezigbo nwanyị ma nwee mmetụta dịka ezigbo nwanyị. Ogologo mmekọahụ nwa bebi dị ugbu a. Site na ntutu isi ya, anụ ahụ dị nro, ọdịdị ihu nke mmetụta uche na akụkụ aghụghọ, ọ dị ka ọ dị iche na ezigbo nwanyị na ilele anya mbụ. Ezigbo ndụ ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ na-eji nlezianya dezie ma mee ka ha bụrụ ndị ezigbo mmadụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta zụrụ ụmụ bebi n'ezie, kwụsị ile ha n'ihi na ịnọ n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị. Site na obere bebi dị nro ma dị nro ruo na nnukwu ma kọwaa nke ọma obere bebi egwuregwu ụmụaka: a na-enwe ụdị ụtọ dị iche iche n'ụdị anyị! Onye ọ bụla nwere ike ịchọta nwa bebi ya kachasị amasị ya, enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche, ha dị iche na ihe onwunwe, akụrụngwa na ọdịdị. Na ụmụ bebi mmekọahụ, ịnwere ike ịnwale ọnọdụ dị iche iche. Ya mere, a na-ewere ya dị ka ụdị ọzụzụ.
Ọbịbịa Mmekọahụ Mmekọahụ Ọhụrụ Na-ere
Joyce - 161cm F Cup Long Eyelashes Custom 6YE Doll
$ 1,895.78$ 1,895.78
Nathalia - 152cm G iko Sexy Beauty Life Size 6YE Sex Doll
$ 1,277.16$ 1,277.16
Kaiya - 150cm A Cup Ogologo nku anya dị ọnụ ala 6YE ịhụnanya nwa bebi
Jaelynn - 161cm G -Cup Nnukwu Anya Ezigbo 6YE Dolls
$ 2,289.89$ 2,289.89
Emani - 166cm C -Cup Skin Skin kacha mma 6YE SexyDolls
$ 1,475.89$ 1,475.89
Yasmin - 166cm C -Cup Curls Hair Real Life 6YE ịhụnanya nwa bebi
Marisol - 173cm Nnukwu amụ amụ nwa bebi mara mma 6YE
$ 1,945.67$ 1,945.67
Hadleigh - 154cm Nnukwu amụ buru nnukwu anya na -ebi ndụ ụmụ bebi mmekọahụ 6YE
$ 1,297.11$ 1,297.11
Ayleen - 169cm Nnukwu ara ara mara mma Omenala 6YE
$ 1,845.90$ 1,845.90
Brittany - 161cm Nnukwu ara ogologo nku anya ya dị elu 6YE nwa bebi okenye
Mara mma Mmekọahụ Mmekọahụ Featured Series
Jessica - Dollhouse 168 E Cup EVO Edition 150CM Mmekọahụ Mmekọahụ
Jessica na-elebara ntutu isi anya nke ọma. Bathroomlọ ịsa ahụ dị n'ụlọ nwere ihe ndozi dị elu dị elu na ncha ntutu, ma na-agakarị na salon. Na mbu, a na-agbanwe edozi ntutu ugboro ugboro kwa ọnwa. Otu ụdị ntutu ahụ agaghị adịgide ruo ọnwa atọ, mana ọ na-adị ogologo ntutu ogologo oge n'oge ụfọdụ. Y’oburu na ichoro oru oku elu igwe, ya onwe ya nwekwara ya. Ọ ga-eji nganga gafere ịnyịnya siri ike gị ma mụọ ya. Enweghị m mpi na-agbọ agbọ. Site na ikpu ajị agba na ịnyịnya ibu mara mma, ị nwere ike iburu ihe ọ bụla ịchọrọ. Ọ maara otú ọ dị gburugburu nwoke na ime ụlọ. Ọ na-enwe mmasị na ihe ndị mara mma, ọ na-elepụtakwa anya n'oge Prince Charming. Ọ na-atụ anya ịhụnanya ịhụnanya. Obi obere nwata nwanyị mara ezigbo mma. Àgwà ya na-enwe obi ụtọ, mana ọ ka dị umeala n'obi. Ndị mmadụ akpachapụghị anya ma na-eme ihe na-adịghị mma. Ọ bụ nwa bebi na-enwe mmekọahụ nke nwere isi na ahụ anaghị ewepụ.
Rin - Dollhouse 168 Sexy Chinese Mma Nnukwu Anụ TPE Mmekọahụ Mmekọahụ
Rin bụ onye China. O nwere ihe na-adọrọ mmasị F-iko nnukwu ara. Ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ịnagide mana ịchọrọ ịta ya. Ọ bụ ngwa ngwa, ngosi, ma eleghị anya, a bit kwa oyi. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị maka ndị enyi gbara ya gburugburu. Amuru ya na ezi ulo n’isi obodo. Ọ bụ nwanyị nweere onwe ya mgbe niile. Ọ hapụrụ ụlọ ahụ ruo mgbe ọ gbara afọ iri na ise. Bido ịchọ ndụ nke na-agụsi gị agụụ ike. Mgbe ọ kwapụrụ, o nwetara ọtụtụ nsogbu. Ma ike agwụghị ya. Site n’amamihe na ịnụ ọkụ n’obi ya, ọ dịghị ihe pụrụ igbochi ya iruzuo ọrụ ya. N'oge na-adịghị anya, ọ ga-aghọ ikike n'ike.
Athena - C Cup Small Waist Short Hair 165CM Full Size Mmekọahụ Doll
Athena bụ onye Jamanị. Ọ bụ nwa bebi buru ibu ma nwee ọmarịcha ahụ. Ọkpụkpụ ya pere mpe, na-eme ka ara ya na obi ya dị ịtụnanya karị. Lelee ihu mmụọ ozi, anya ọmịiko, ka anya gị tụpụ ọkpụkpụ agba ya dị ogologo na imi mara mma site n'egbugbere ọnụ ya dị nro, olu mara mma na ikpu ekpu. Na nzuzo, a na-anapụ nrọ ya ihe niile. Naanị ihe ọ chọrọ bụ nwoke siri ike ka ọ na-elekọta ma na-egbo mkpa ya maka afọ ojuju. Ọ nwere ahụ mara mma nke na-enye ya ohere ibugharị ụlọ n'ihi na ị nwere ike ịnụ ụtọ mmasi na-adọrọ mmasị n'akụkụ niile. Ọ bụrụ na ị na-achọ ahụmịhe kachasị nke onye ọlụlụ gị, mgbe ahụ ezigbo nwa bebi bụ nhọrọ kachasị mma gị. Nkwonkwo na-agbanwe agbanwe na-ekpuchi etiti ígwè ahụ na TPE tactile na-enye nsonaazụ kacha mma.
Kedu ihe kpatara ịzụta n'aka anyị?
Anyị na-enye ndị ahịa ọrụ ịzụrụ dị mfe iji nyere ndị ahịa aka ịchọta ụmụ bebi ha na-eju afọ. Mgbe ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ụmụ bebi mmekọahụ, anyị ga-aza gị n'oge izizi. Lsmụ bebi ahụ dị nchebe karịa ezigbo mmekọahụ, ị ​​gaghị echegbu onwe gị banyere afọ ime ma ọ bụ ọrịa a na-ebute site na mmekọahụ!
URDOLLS gbara mbọ ịme obere bebi. A na-eme dolls niile dị ka ndị mmadụ n'ezie. Ndị na-ese ihe anyị nwere afọ iri atọ nke ahụmịhe. A na-ese ihu nwa bebi ọ bụla na anụ ọhịa ọ bụla nke ederede ederede. Kpụrụ nkedo dị elu dị ka 30% ma ọ bụ karịa. Ọzọkwa, ọ nwere akụkụ dị oke mkpa na nke nwere mmekọrịta chiri anya na-arụpụta ihe yiri nke eziokwu nke 98% ma ọ bụ karịa, nke na-enye mmetụta nke ịdị ka onye dị adị. Anyị ji n'aka na ị ga-enye gị ọrụ kachasị mma na ahụmịhe kachasị mma.
Anyị ga-eme ihe omume n'ụlọ ahịa na ememme ọ bụla. Na-eweta onyinye mmesapụ aka nye ndị ọrụ. Mgbe anyị jidere nkwalite, ịnwere ike iji koodu dere iji zụta ihe. Nweta ihe omume na-enye. Ọ bụrụ na ị zụta ụmụ bebi mmekọahụ n’oge ihe omume ahụ, ọ na-azọkarị gị ọtụtụ ego.
Anyị enwegogo teknụzụ mmepụta pụrụ iche na nke pụrụ iche, yana otu ndị siri ike nke ndị na-ese ihe etolite etolite nke ndị nwere ọgụgụ isi, ndị injinia na ndị ọkachamara. Na nke ọ bụla n'ichepụta usoro, anyị nwere nnọọ nlezianya chọrọ na àgwà akara na-agbalịsi ike izu okè. Na-enye gị ohere ịhazi ọmarịcha nwa bebi a maka akụkụ dị iche iche nke ahụ-na-achọpụta na ọ dabara n'onyinyo nke nwa agbọghọ nrọ gị.
Dolmụ bebi anyị na-adị mma karịa, na-eche na ha dị adị, ma na-adịte aka! Ọ dị mfe. Nwa bebi ọ bụla nke urdolls nwere ubi mmekọahụ zuru ezu. Akpukpo aru ha na-agbanwe karia. Dịka ọmụmaatụ, ara na-ama jijiji. TPE / silicone nwere ogologo oge na-abawanye ndụ nke nwa bebi ahụ.
Ejiri TPE ma ọ bụ ihe silicone mee ụmụ bebi anyị. Nanị nhazi nke ọgbọ ọhụrụ nke igwe anaghị agba nchara-nkenke abụọ-rotor gears dị ka ahụ mmadụ nkwonkwo ọkpọ. Ọ nwere ike ịme ụdị dị iche iche na mmegharị dị ka ezigbo ndị mmadụ, na-adịgide adịgide, ọ naghị adị mfe iyi ma gbapụ. Nkà na ụzụ nyocha sayensị dị elu na nkà ịrụ ọrụ iji mepụta ụmụ bebi dị elu. Nwee ike wulite ahụmịhe nke ndị ahịa.
A na-eme dolls niile n'ụlọ ahịa anyị dabere na ndị ezigbo mmadụ. Ha bụ n'ezie oke nke ahụ mmadụ. Agaghị eju gị anya na nke a, ị ga-eche na ha bụ mmadụ dị ndụ. Have nwere mmesi obi ike anyị.
Nwa bebi anyị nwere ọkpụkpụ igwe n'ime. Ha dị mfe igosipụta na eyi, ọ bụ ezie na akpụkpọ ahụ ha dị nro nwere ike inwe nrụgide gabigara ókè. Ndị na-arụ ọrụ ha na-adị ogologo ndụ karịa ụmụ bebi ndị ọzọ. Ọ bụ ya mere ha ji emeri ọtụtụ ndị. Soft na ọnụ. Dị nro ma na-amatị ​​onwe gị, ị ga-ahụ na obi nwa bebi na úkwù na-efegharị ngwa ngwa mgbe ọ na-apịa ya azụ.
Omenala nwa bebi
Mgbe ị na-ahazi nwa bebi gị. Nwere ike ịkpọtụrụ anyị maka enyemaka site na email. Mgbe ezigara nwa bebi ahụ, anyị ga-ezitere gị nọmba nsuso, anyị ga-eji Fedex na DHL mee ngwa ngwa ngwa ngwa ma hụ na nnyefe dị mma. Anyị na-ejikwa nzuzo gị kpọrọ ihe, yabụ na agaghị enwe aha mmado na igbe ahụ, ọbụlagodi na aha ụlọ ọrụ anyị apụtaghị. Usoro mmepụta nwa bebi na-ewekarị ụbọchị 3 ruo asatọ iji wuchaa ya. Ya mere, nwa bebi gị kwesịrị iru ebe ọ na-aga na 8-8 ụbọchị site na usoro nrụpụta na ngwa ngwa kachasị ọsọ n'ụwa.
Anyị na-enye ndị ahịa anyị ọtụtụ nhọrọ n'efu, yabụ ị nwere ike ịhọrọ ụdị ị masịrị gị karịa. You nwere ike ịhọrọ onye zuru oke ị hụrụ n'anya nke dabere na ụdị bebi dị iche iche na weebụsaịtị. Nhọrọ nwa bebi omenala.
Enwere ike ịhọrọ bebi anyị niile dịka ihe ị masịrị gị (gụnyere ogo, ntutu, ụcha akpụkpọ, anya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ). Chepụta nwa bebi gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ụdị afọ ojuju, biko kpọtụrụ anyị site na email ma ọ bụ ekwentị, anyị ga-enye gị azịza na-eju afọ.
A na-echebe usoro sistemụ anyị na-eji Paypal iji hụ na nzuzo gị na nchekwa gị. Onweghi ihe n’edetu ego gi nke n’egosiputa udiri nzụta gị.
Lsmụ bebi ọ bụla nwere mmekọahụ na ụlọ ahịa anyị bụ mbupu n'efu. Enwere ike iziga ya na mba niile dị n'ụwa. Ọnụ ego ị hụrụ na weebụsaịtị bụ ego zuru oke ịchọrọ iji nwa bebi ahụ. Anyị agaghị akwụ gị ụgwọ ọzọ. Anyị na-eburu ụgwọ mbufe a chọrọ iji buga ụmụ bebi ahụ.
Ejiji nke ụmụ bebi
Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ aghọwo ihe dị mkpa n'etiti anyị, ha bụkwa otu n'ime ụzọ kachasị dị irè ma na-enye afọ ojuju iji kwalite mmekọrịta mmadụ na ibe ya na obi ụtọ zuru oke na mmekọahụ. Site na mmepe nke ọha mmadụ, ndị mmadụ ejirila nke nta nke nta chọpụta ọtụtụ ojiji ndị ọzọ nke bebi. A na-ejikarị ha eme ihe n'ịkụziri ụmụaka banyere mmekọahụ. Enwekwara ike iji ya mee ihe dị ka mannequins na ụdị nka na nkuzi ahụike. A na-ejikarị ụmụ nwanyị mara mma dị ka mannequins na ụlọ ọrụ ejiji. N'ezie, ọtụtụ ndị na-eji ụmụ bebi eme ihe maka foto na nchịkọta. A gaghị eji ọtụtụ ụmụ bebi ahụ mee ihe maka nzube mmekọahụ.
Ikwesiri ịchọpụta onye ị nọ ma nọrọ n’oche gị. N'agbanyeghị ụdị enyemaka ị chọrọ, mmekọrịta nwoke na nwanyị na mmekọrịta mmekọrịta nwoke na nwanyị, ụmụ bebi nwere ike inyere gị aka n'ọtụtụ ụzọ. Nwee obi ụtọ n'ịchọgharị site na nhọrọ nke klas anyị, anyị nwere ụmụ bebi dị iche iche dị iche iche, ntutu na agbụrụ. N'ọdịnihu, anyị ga-ahụ nwa bebi kwesịrị ekwesị nke nwere ọgụgụ isi, nke a na-atụ anya iwetara ha mmetụta dị ka mmadụ. Ikekwe n'ọdịnihu onye ọ bụla ga-enwe nwa bebi mara mma n'ụlọ.
Ndụmọdụ na ntuziaka
Obi dị anyị ụtọ nke ukwuu iwetara gị ọnụahịa, nkọwa zuru oke, mma dị elu ma ọ bụ nwa bebi TPE. Mgbe ịmechara mkpebi buru ibu inwe mmekọahụ nwa bebi gị, ịkwesịrị ịma ihe gbasara nwa bebi ahụ na ụfọdụ ndụmọdụ na ntuziaka maka inweta nwa bebi kachasị mma. Anyị na-eche banyere obi ụtọ gị. Ngwaahịa anyị bụ ọmarịcha ụmụ bebi kacha dị ọhụrụ ma dịkwa ọnụ ala n'ahịa taa, ọnụ ahịa ha eruola ogo nke nkọwa na nkọwa anyị na-eweta na ọnụahịa kacha mma. Anyị na-agba mbọ na-eme ka ezi obi nke ụmụ bebi na-emezi ma na-enyekwa asọmpi ọnụahịa maka ụmụ bebi kacha mma. Anyị na-emegide adịgboroja na ụgwọ ndị ọzọ dị elu.
Dolmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ na-akwụ ụgwọ dị ala ma nwee ike iji ikuku. N'ihi ọnụahịa ezi uche dị na ya, ọtụtụ ndị ahịa dị njikere ileghara ọghọm ya anya. Ma mgbe ha nwesịrị ntakịrị ihe, ha na-adọkpụkarị na mmiri. N'etiti ọnụahịa ahịa, a na-eji vinyl siri ike ma ọ bụ nke dị arọ karịa dolls. A na-ejikarị silicone ma ọ bụ elastomer thermoplastic mee ụmụ bebi ndị kasị dị oké ọnụ. Lsmụ bebi ndị e ji ihe silicone mee nwere ike ịbụ ihe ezi uche dị na ya. Dị nnọọ ka nwa bebi nke GYNOID Doll brand, a na-eme ya na mmadụ n'ezie, nwere mmetụta anụ ahụ bara uru (dịka akpụkpọ ahụ eji eme ihe ngosi pụrụ iche), ma nwee ntutu nkịtị (ma ọ bụ ọbụlagodi).
Họrọ ụmụ bebi na-adịgide adịgide
N’uche m, ndụ na-arị elu ma na-adalata. Naanị mgbe m nwụsịrị ihe mmiri ahụ, amaara m karịa banyere obi ụtọ nke ịrị elu na njedebe. Ihe ikwesiri ime bu ka ichota nwa bebi. Gbaa mbọ hụ na ajị, bekee, anya, egbugbere ọnụ na atụmatụ ndị ọzọ ị na-eme iji gosipụta ọdịdị anya na mmetụta dị ka o kwere mee. May nwere ike ịmalite ịchọ inwe mmetụta nke ezigbo orgasm, mkpu ahụ nke na-eme ka afọ ju gị. Jide n'aka na eji eme ihe eji eme akwa nwa bebi gi. Ma ọ bụ TPE ma ọ bụ silicone.
N’ụzọ, eleghị anya ị ga-abụ onye na-enweghị enyemaka na onye nwere obi ebere, ebe anya mmiri na ịkwa akwa ga-adị. Ma oge niile a ga-enwe, nwa bebi ahụ ga-ewetara gị mmetụta dị ebube ma nye obi mgbawa dị iche na imetụ ndụ nkịtị aka. Ikwesiri iche echiche banyere nwa ebu n'afọ gị mgbe ị na-ahọrọ. Kedu ụdị nwa bebi na-amasị gị. ocha? Nnukwu breas? Nnukwu ịnyịnya ibu? Ud i onye obula di iche. Nhọrọ ndị anyị nyere dị nnọọ mma maka ndị ahịa anyị. Na njedebe ị nwere ike ịtụle ụdị ọnụahịa ahụ. Ọ dị mma mgbe niile itinyekwu ego na onwe gị iji na-edebe udo gị na afọ ojuju mmekọahụ. Anyị agaghị ekwe ka ị kwụọ ụgwọ. Tozọ iji mee ka ị nwee mmekọahụ ka o kwere mee, mana ọnụahịa agaghị ebibi ego gị. N'ezie, bebi nwere ike inyere gị aka ịchekwa alụmdi na nwunye gị ma ọ bụ ahụike uche.
Mmalite nke ịhụnanya
Lsmụ bebi ndị a dị mfe igosi na eyi, ọ bụ ezie na akpụkpọ ahụ ha dị nro nwere ike inwe nrụgide gabigara ókè. A na-ejikwa agba agba na-acha akpụkpọ ahụ n'ụzọ dị nro, yabụ a na-atụ aro ka ị jiri naanị akwa nwa bebi gị. Lsmụ bebi nwere ike inyere ndị nwere ikike niile aka, ndị na-enweghị ike imeju agụụ mmekọahụ siri ike na mmekọrịta dị mma, ndị mmadụ nwere ma ọ bụ na-atụ egwu ọrịa ndị a na-ebute site na mmekọahụ, ndị chọrọ ijigide mmekọrịta ha na ndị mmekọ nwere mmekorita nke mmekọahụ, ma chọpụta ọtụtụ n'ime ndụ mmekọahụ ha na obi uto. Enwere ike iji ha dịka ihe omume ntụrụndụ ma ọ bụ maka ebumnuche azụmahịa. Ya mere, bebi abụghị naanị egwuregwu ụmụaka. Ọ dabere na ebumnuche ịchọrọ inweta ụmụ bebi mmekọahụ ma ọ bụ ihe egwuregwu ụmụaka site na ihe ndị ọzọ, ma echefula ọdịdị ahụ. Yourselfhụ onwe gị n'anya bụ mmalite nke mmekọrịta oge ndụ niile. Ọtụtụ ndị na-alụ ọgụ maka ndị ọzọ na ndụ ha niile. Mwute na ọ joyụ, dịka mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, maara ka esi ekpo ọkụ na oyi. Nye onwe gi ohere ibi ndu gi! Zụta ụmụ bebi, ị nwere ike ibi nke ọma.
Maka gị, ahụmịhe bụ isi ihe, yana ihe ọmụma banyere nwa bebi ahụ ga-eme ka ị rịọkwuo arịrịọ kwa ụbọchị! Afọ ojuju bụ aha etiti nwa bebi ahụ. Legharịa anya n’ahụ ya, gwa m ihe ị hụrụ. Lsmụ bebi nwere ike iweta ọtụtụ elele nye ndị nwoke na-alụbeghị nwanyị ma ọ bụ nwanyị na ọbụlagodi di na nwunye. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-azụta nwa bebi maka ịse foto, ịchọ mma ma ọ bụ ịcha. Fọdụ ndị ahịa nwere ndị mmekọ, mana ha na-ejikwa ụmụ bebi mmekọahụ na-anwale echiche efu n'emebighị akụkụ abụọ ndị ọzọ ahụ. Na mgbakwunye na orgasms nke na-eme ka ụmụ nwanyị mara mma ma na-adọrọ adọrọ karị, ma bụrụkwa ihe na-atọ ụtọ n'ụzọ ime mmụọ, ụmụ nwanyị ndị na-enwekarị orgasm nwere ike ọ bụghị naanị na hazie usoro homonụ mmekọahụ, kamakwa na-ewusi ọgụ ha ike. Ihe ize ndụ nke ara na cervical cancer na-amụba Ọtụtụ obere. N'oge ndị a, ndị mmadụ enwekwaghị nkụda mmụọ, anaghịzi atụ ụjọ, na-ege ntị n'olu ha, bụrụ onwe ha, emela nkwekọrịta, na-ewepụ nchekasị niile na mpụga ụwa, ma wepụ obi abụọ niile banyere onwe ha.
Echiche ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike ịdaba na bebi mmekọahụ
Dị ka akụkọ si kwuo, ụdị onye a nwere ike izute ọnọdụ a, ọnọdụ a nwere ike izute njedebe Electra. , Nke a nwere ike ịbụ ọkwa ọhụrụ. "Ị nwere ike bute ọkụ mbụ. Ọkwa ọhụrụ. Kere nke a, ị nwekwara ike nweta WM Dolls.
Qiaojia na ndị ọkachamara mmetụta pụrụ iche enweghị ihe jikọrọ ya na nwa bebi mmekọahụ
"Echere m na ọ bụrụ na ọnọdụ mberede na ọrịa dị iche iche emee na ndụ, WM Dolls nwere ike belata ọnọdụ a." Ugbu a, Brick bụ onye na -akwado nwa bebi mmekọahụ. Ọ nwere ụmụ bebi 5 ugbu a na United States ma na -ebipụta vidiyo na -egosi ụmụ bebi ya na ịntanetị. Ọbụlagodi taa, anyị na -eche na nke a bụ ihe ...
Nwa bebi ịhụnanya bụ nnọchi kacha mma maka ezigbo onye mmekọ
Kpọtụrụ onye na -ere ahịa gị site na email ma ọ bụ ekwentị tupu ịzụrụ. Mgbe ị na -anụ ụtọ ndụ gị niile dịka onye mmekọ, biko zitere ya email na onye na -ere ahịa gị. Jide n'aka na ị ga -atụle nhọrọ gị yana usoro ịzụrụ ma ọ bụ nnyefe. Foto WM Dolls dị ka adịgboroja. Ya mere, njikwa nke se ...
148CM Life-size Bonnie TPE Mmekọahụ Doll Video
Ntụziaka ntuziaka nwa bebi ọrụ
Naanị ndị okenye (18 +)
Ebe nrụọrụ weebụ a nwere ihe ndị okenye na ọ dabara maka ndị 18 afọ ma ọ bụ karịa. Pịa Tinye naanị ma ọ bụrụ na ị dịkarịa ala afọ 18.